WAR DEG DEG AH: Somaliland oo ku dhawaaqday dagaal ay kusoo qaadayso Puntland. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH: Somaliland oo ku dhawaaqday dagaal ay kusoo qaadayso Puntland.
HARGEYSA(P-TIMES)- Golaha Wasiiradda ee Somaliland oo yeeshay kulan gaar ah ayay uga wada hadleen arrimaha ku saabsan xaaladda gobalka Sanaag & faragalin ay sheegeen in ay uga timid dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, taas oo ay uga gol lahaayeen socdaalka Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku tagay deegaanka gobalka Sanaag.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasiiradda Somaliland ayaa lagu yiri.
1. Somaliland waxa ay aaminsan tahay nabadgelyada iyo deggenaanshaha gobolka geeska Afrika, waxana ay kasoo horjeeddaa colaad iyo khal-khal nabadgelyo-darro oo ka dhaca gobolka.
2. Soomaaliya waxa ay kusoo xad-gudubtay Somaliland, iyada oo food-saare ka dhiganaysa Puntland, sidaynu ognahay sannadkan horraantiisii waxa yimid gobolka Badhan wasiir Federal ah oo horseeday iska hor-imaatin ciidan oo dhiig ku daatay.
3. Somaliland waxa ay aqbashay dhexdhexaadintii IGAD, AU-da iyo wakiilka UN-ta Soomaaliya u jooga oo ahayd in colaadda la joojiyo oo maxaabiista la kala beddesho oo ay wada-hadlaan Somaliland iyo Soomaaliya, hase yeeshee, waxa caddaatay in dawladda Farmaajo ay ka go’an tahay inay dagaal joogto ah kusoo qaaddo Somaliland, iyada oo dabada ka riixaysa Puntland. Imaatinka Cabdiweli Gaas ee Badhan waxa uu qeexayaa faro-gelin qaawan oo siyaasadeed iyo joogtaynta colaad Somaliland ka dhan ah, sidaa daraadeed Somaliland waxa ay go’aansatay in dalkeeda, dadkeeda iyo qaran-nimadeedaba ay difaacayso.
4. Waxannu u sheegaynaa Soomaaliya in Somaliland ay si waafi ah uga fal-celin doonto xad-gudubkaa aad ka badheedheen.
tukaraq ayaaba la is hor fadhiyaaye may xabada bilaabaan…waa shabeelkii yiri oo kale libax ma layne.. .. giiraa ilamahayga laysay ….. farmaajo isagaaba hooskiisa ka cararaya oo taangi ugandees ku dhexnool. maskiinka maxay u hafrayaan
Tree SL FARQIGA U DHAXEEYA BURCO,BOORAME IYO BADHAN WAA INAY GARTAAN BURCO WAA DEGAAN ISAAQ BOORAME WAA DEGAAN SAMAROON OO XOOG LAGU HAYSTO LAAKIIN BADHANE LABADAA MIDNA MAAHA.